Henry RANDZAVOLA (1873 – 1953) | FJKM Ambonin'Ampamarinana
Teraka tao Fianarantsoa tamin’ny 5 Novambra 1873 izy. Zanak’i Randriamahefa, Mpitandrina sy Rasoamihaja. Nanomboka nianatra tao Ambalanjatovo, tonga hatrany amin’ny Sekolin’ny FFMA aty Ambohijatovo Antananarivo. Nanambady an’i Rasoaray ary nanana taiza maro.
Tena fianakaviana kristiana no nisy azy, taizan’ny misionera F. F Radley. Tia fianarana, manam-pahaizana indrindra amin’ny tenim-pirenena. Nampianatra tany Fianarantsoa izy, tonga mpitandrina teto Ambonin’Ampamarinana. Tena Raiamandreny am-panahy.
Fitaizam-panahy, fanabeazana kristiana, fitondram-piangonana no voatahiry ao amin’ny asa sorany. Tsangambato lehibe ny Fomba Malagasy, ny diksioneran’ny Baiboly nataony sy nandraisany anjara. Tsangambato eto amin’ny Fiangonana ny “Orgue éléctronique Hammond avy any Amerika. Nandray anjara mavitrika tamin’ny asa iombonana izy: I4B, IKT, I6B. Teo amin’ny sehatra protestanta no nandehanany tany Jerosalema sy tany Eoropa ka nanontany ny boky “Voasarin’ny Namehana”.
Mambra tao amin’ny Akademia Malagasy koa izy. Hanaovana fandalinana eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo ny asa sorany.
Hoy ny mpandinika tantara hoe: Randzavola, historien du Betsileo.
Nitondra ny Fiangonana Ambonin’Ampamarinana nandritra ny 30 taona izy (1923 – 1953). Miaraka amin’izany ireo Fiangonana miray amin’ny distrikan’Ambonin’Ampamarinana faha-LMS.